Ezona ncwadi zibalaseleyo eMexico kwimbali: zithini? | Uncwadi lwangoku
UAlberto Legs | | Iincwadi, Inoveli
Ukuqhubela phambili kunye nokulalisa, i Uncwadi lwaseMexico Kwakusoloko kuphawulwa kukungaziphathi kakuhle okanye impembelelo yoQhushululu lwaseMexico olwajika uhlobo lobuntatheli lwandulela amabali obuzwe kunye nababhali. Ithambeka eliqhuma kwezi Iincwadi ezilungileyo zaseMexico Kufuneka ufunde nokuba kukanye ebomini bakho.
2 Njengamanzi etshokholethi, nguLaura Esquivel
3 ILabyrinth yeSolitude, ngu-Octavio Paz
4 Iimfazwe entlango, nguJosé Emilio Pacheco
5 Iyelenqe, nguJuan José Arreola
6 Ukusweleka kukaArtemio Cruz, nguCarlos Fuentes
7 UMgcini kaMtyholi, nguXavier Velasco
8 Indlu kwisitalato iMango, nguSandra Cisneros
Ukuba kukho incwadi yaseMexico, nguPedro Páramo, enye Uninzi lwamabali endalo iphela kuncwadi lwaseLatin American. Yandulelwa yingqokelela yamabali ecetyiswayo Ithafa Elitshisayo UJuan Rulfo wayesele esazisa ngayo ngedolophu yaseComala, UPedro Paramo kuvusa intsingiselo yentlango yaseMexico, yamazwi angaqondakaliyo kunye nezitalato eziyinkangala embindini esizifumana kuwo amabali amabini: NguJuan Preciado, umfana oza kukhangela utata wakhe uPedro Páramo, kunye nale yokugqibela, i-cacique eyonakaliswe ngamandla. Yapapashwa ngo-1955 yaza yaqwalaselwa ngabaninzi njengenye ye Iinoveli zokuqala zokwaziwa komlingo waseLatin American, UPedro Páramo ngomnye wabo Iincwadi ezibalulekileyo wonke umntu makafunde.
Xa wonke umntu wayecinga ukuba ubunyani bemilingo obukhankanyiweyo sele bufikelele esiphelweni, ii-80s zaphela ngokupapashwa komnye wemisebenzi emikhulu yeeleta zaseMexico. Beka kwindawo yaseCoahuila phakathi kweNguqulelo yaseMexico, ibali libalisa ngothando phakathi kukaTita, ogwetyelwe ukukhathalela abazali bakhe ngokufa njengazo zonke iintombi ze-benjamina, kunye noPedro, onikwe isandla sikadadewabo kaTita, uRosaura . Konke oku, kunye nezitovu zaseMexico, iincasa kunye nezitya zokuphilisa iihoneys zothando. Njengamanzi eTshokholethi kuko kukodwa iresiphi edlala ngezithako eziyimfuneko ukungaphikiswa: ibali lothando eliphekwe kubushushu obuphantsi, indibaniselwano egqibeleleyo yobomi bemihla ngemihla kunye nomlingo kunye necherry ngaphezulu ngendlela yesiphumo esingalibalekiyo.
ILabyrinth yeSolitude, ngu-Octavio Paz
Uncwadi lobuzwe njengesiphumo se Uhlaziyo lwaseMexico Ibandakanya imisebenzi eyahlukeneyo apho ababhali bazamile ukuphanda inkcubeko, ubume kunye nokuziphatha kwamaMexico. Umzekelo olungileyo ngu ILabyrinth yeSolitude, Umsebenzi wobugcisa kaOctavio Paz owapapashwa ngo-1950 wenziwa ngu izilingo ezilithoba apho umbhali angena kwiziganeko zembali ezakhokelela, ngokutsho kwakhe, ethile Ukuphelelwa lithemba kuluntu lwaseMexico. Amanqaku okugqibela omsebenzi afake i-Postcript eyaziwayo, inkomfa yoXolo kwiYunivesithi yaseTexas ngo-1969 esekwe kwithiyori yencwadi, okanye Buyela kwiLabyrinth of Solitude, udliwanondlebe apho ingcinga ejikeleze iMexico ehlala "Uthobela ilizwi lomdyarho."
Iimfazwe entlango, nguJosé Emilio Pacheco
Ukuqala ukupapashwa kwisongezelelo sangoMgqibelo ngo-1980, Amadabi entlango Yaphela ikhutshwa njengenoveli emfutshane emva konyaka. Cwangcisa ngo-1967, umdlalo kaPacheco ubalisa iminyaka engamashumi amabini edlulileyo ngelizwi likaCarlos, umfana osuka e IColonia Roma kwisiXeko saseMexico ethi ibonakalise ngokugqibeleleyo uluntu lwaseMexico lwelo xesha, oluthi ngaphandle kokuqhubela phambili nokwamkela ukuphuculwa liqhubeke nokutsala ukwaphuka okuya kuthi kuphele kuqhuma kwikamva elingekude kakhulu. Enye ye Iincwadi ezilungileyo zaseMexico xa kuziwa ekuqondeni imbali yamva nje yelizwe laseMntla Melika.
Iyelenqe, nguJuan José Arreola
Umhlobo omkhulu kaJuan Rulfo kunye nomhleli ongapheliyo weempapasho ezahlukeneyo zoncwadi zempumelelo enkulu eMexico kwiminyaka yama-50-60, uArreola wayengomnye Ababhali abaninzi Kwisizukulwana sakhe, kunxibelelana rhoqo nee-avant-gardes ezahlukeneyo kunye nelizwe apho waba lelinye lawona mazwi makhulu. Iyelenqe, epapashwe ngo-1952, iseti yamabali umbhali awasebenzisayo jonga kwiimvakalelo zendalo yonke ezinje ngothando, unxunguphalo, okanye isizungu Yale ndoda yanamhlanje, kwangaxeshanye icinga ukuba yonke inkqubo yokuhlanjululwa ngokubandakanya imibhalo eyahlukeneyo yombhali eyayixinaniswe kwinani elincinci lamaphepha.
Ukusweleka kukaArtemio Cruz, nguCarlos Fuentes
Ngaphandle kokungafumani Ibhaso likaNobel kuNcwadi Ukuqinisekisa ukuba uhanjisiwe xa wamkelwa nguGabriel García Márquez ngo-1982, uFuentes ngomnye wababhali abaphambili boonobumba besiLatin America, ophumeleleyo amabhaso afana neNkosana ye-Asturias okanye iRómulo Gallegos. Umbhali ogama lakhe lokufunda lubandakanya imisebenzi enamandla njenge Ukufa kukaArtemio Cruz, inoveli ekhumbula ifayile ye Iziphumo zoHlaziyo lwaseMexico kwiqela elidumileyo Ngokukodwa, ka-Artemio Cruz, owathi, ebhedini yakhe yokufa, wasixelela ngembali yakhe yahlulahlulwa ngokwezigaba ezathi emva koko zatshata notshintsho olusuka kwimveli yaseMexico lusiya kule yanamhlanje efana naleyo yango-1962. Kwakungunyaka omnye Ukusweleka kukaArtemio Cruz kwapapashwa de kwaba yenye yezo ncwadi zifunekayo ukuqonda isayikholoji yaseMexico izolo, namhlanje nangomso.
UMgcini kaMtyholi, nguXavier Velasco
Enye yeenoveli ezazisetyenziswa kakhulu kuncwadi lwaseMexico yile UMtyholi ophumelele amabhaso e-Alfaguara Ngo-2003. Ibali, elaligxile kwesinye seziqendu eziphambili zoncwadi lwaseMexico lwenkulungwane ye-XXI njengokufudukela kwelinye ilizwe, libalisa ngohambo lukaVioletta, umthandi wobunewunewu oneminyaka elishumi elinesihlanu owathi emva kokuba ebe ngaphezulu kwekhulu lamawaka eerandi kuye Abazali bazimisele ukuwela umda baye eNew York, isixeko apho ukugqithisa kwakhe kunye nothando bachaza inqanaba elitsha le-protagonist.
Indlu kwisitalato iMango, nguSandra Cisneros
Ngaphandle kotata owayesoloko elilahla iphupha lakhe lokubhala, uSandra Cisneros ukwazile ukubamba inxenye yeminqweno kunye nokuzisola kwesizukulwana sabafuduki baseMexico eUnited States njengesiseko esifanelekileyo somsebenzi wakhe odumileyo. Ehamba nemifanekiso eyahlukeneyo, Indlu ekwisitalato iMango yapapashwa ngo-1984 iba ngu impumelelo yokuthengisa kunye ne-X-ray egqibeleleyo yoluntu lwaseLatino kwihlomela-dolophu laseChicago eline-protagonist, i-Esperanza Cordero encinci, eba isithembiso sephupha laseMelika kubemi baseLatino ukuba kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo kuye kwavela indalo iphela yamabali malunga ne-diaspora.
Zithini, ngokoluvo lwakho, ezona ncwadi zibalaseleyo eMexico?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezilungileyo zaseMexico
NGABA UNGABEKA UNYAKA WOKUPAPasha INQAKU UKUZE UCABANGE NGALO?
UDale emmert sitsho
Abo bangezantsi, uMariano Azuela
Ukumbombozela kweenyosi, nguSofía Segovia
Abantwana abalahlekileyo nguValeria Luiselli
Phendula kuDale Emmert